Xildhibaano u socday la kulanka Guddoomiye Mursal oo loo diiday inay galaan Madaxtooyada | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Xildhibaano u socday la kulanka Guddoomiye Mursal oo loo diiday inay galaan...
Xildhibaano u socday la kulanka Guddoomiye Mursal oo loo diiday inay galaan Madaxtooyada
Qaar ka mid ah Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa laga hor-istaagay inay la kulmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal.
Sida ay sheegeen Xildhibaano dhowr ah oo saaka doonayay inay gudaha u galaan Madaxtooyada galaan ayaa loo diiday, iyagoo ku eedeeyay Madaxtooyada inay xayiraad saartay Guddoomiye Mursal.
Xildhibaan Khaliif ayaa sheegay in Madaxtooyada ay xabsi guri gelisay Guddoomiye Mursal, isla markaana Xildhibaano doonayay inay galaan loo diiday.
Guddoomiye Mursal ayaa degan guriga Martida Madaxtooyada, gaar ahaan Dhismaha loo yaqaano Villa Uganda oo uu degenaa tan iyo markii loo doortay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, hase ahaatee waxaa uu Xafiiskiisa ahaa Villa Hargeysa oo ku dhegan Madaxtooyada.
Shalay ayay aheyd markii Guddoomiye Maxamed Mursal uu qabtay mooshin xil ka qaadis ah oo laga keenay Madaxweyne Farmaajo, waxaana ka dhashay xasarad siyaasadeed iyo Guddoonka Baarlamaanka oo ku kala qeybsamay.
Lama oga in tallaabada ay qaadeen Ilaalada Madaxtooyada inay tahay mid loogu tala galay in Xildhibaanada aanay geli karin Madaxtooyada, maadaama xilliyadii hore ay ahaayeen kuwo iska geli jiray Madaxtooyada oo aan laga celin jirin.
Previous articleC/raxmaan C/shakuur oo soo gaaray Muqdisho iyo Xildhibaano mucaaradka oo soo dhoweeyay
Next articleGuddoomiye kuxigeenada Baarlamaanka oo soo saaray go’aano lagu go’doominayo Guddoomiye Mursal